Abuu Mansuur Al-Amriki oo la arkay lana xaqiijiyey in uu noolyahay – SBC
Abuu Mansuur Al-Amriki oo la arkay lana xaqiijiyey in uu noolyahay
Posted by editor on Apriil 28, 2012 Comments
Wararka ka imaanaya degmada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi lagu arkay, lana xaqiijiyey in uu noolyahay Cumar Xamami oo loo yaqaan Abu Mansuur Al-Amriki oo ka mid ah hogaamiyeyaasha sar sar ee xarakada Al-Shabaab isla markaana lagu tiriyo xubnaha Al-Qaacida ee ku sugan gudaha Soomaaliya.
Dad goobjoogaal ah oo ku sugan magaalada Marka oo codsadey inaan magacooda saxaafada laga sheegin ayaa xaqiijiyey in arkeen Al- Amriki oo ay la socdaan saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo halkaasi soo gaarey, waxaana warkan uu meesha ka saarayaa in ninkan la dilay iyadoo ay horey u soo baxeen warar sheegaya in khilaaf ka dhashay filim muuqaal ah oo uu baahiyey loo diley.
Ilo wareedkan ayaa sheegaya in Al-Amriki, xaaskiisa iyo wiil ay dhaleen ay nabad qabaan oo aanay jirin wararkii sheegayey in la dilay ama uu ku jiro xabsi guri, warkaasi oo ay dhawaan faafiyeen qaar ka mid ah saxaafada.
Qof ku dhaw qoyska gabadha uu ku qabao Al-Amriki ayaa u xaqiijiyey ila wareedkan in ay aad ula yaabeen wararka ay faafiyeen qaar ka mid ah saxaafada oo ku aadan in la dilay hogaamiyahaasi wuxuuna sheegay in Abu Mansuur Al-Amriki uu nabad qabo.
“Saaka waxaan arkay Al-Amriki xaaskiisa iyo wiilkiisa wayna nabad qabeen, isaguna wax xabsi guri ah oo uu ku jiro ma jirto inta badan wuxuu ku noolyahay magaalada Marka, marka waxaan arkaa isagoo meelaha marmaraya qarsoodina ma ahan, daris ayaan nahay” ayuu yiri qof sheegay in uu daris la yahay qoyska Al-Amriki oo codsadey inaan magaciisa saxaafada laga sheego.
Cumar Xamami oo loo yaqaan Abu Mansur Al-Amriki oo ka soo jeeda gobolka Alabama ee dalka Mareykanka wuxuu ku sugnaa tan iyo dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay gudaha Soomaaliya, isagoo ka mid noqdey hogaamiyaasha sar sar ee Shabaab iyo Al-Qaacidada Bariga Afrika.